Maurizio Sarri Oo Ka Laabtay Eedayntii Cristiano Ronaldo, Kuna Beddelay Amaan | Laacibnet.net
Maurizio Sarri Oo Ka Laabtay Eedayntii Cristiano Ronaldo, Kuna Beddelay Amaan
June 27, 2020 Abdiwahab Ahmed
Tababaraha Juventus ee Maurizio Sarri ayaa canaantii uu usbuuc ka hor u jeediyey Cristiano Ronaldo, waxa uu ku beddelay amaan, kaddib markii xiddiga reer Portugal xalay dhaliyey, laba kalena caawiye ka noqday.
Ronaldo ayaa rikoodhe gool u baddalay kulankii ay Juve 4-0 ku karbaashtay Lecce, waxaanu goolkaasi noqday midkiisii 23aad ee xili ciyaareedkan uu Serie A ka dhaliyo, hase yeeshee, waxa kale oo wanaagsanaa bandhiggiisa guud ee kulanka, isaga oo qayb ka qaatay laba ka mid ah goolasha kale ee kooxdiisa.
Tababare Maurizio Sarri oo dhamaadkii ciyaarta warbaahinta la hadlay ayaa beddelay hadalkii hore uu ugu canaantay laacibka reer Protugal ee uu ku sheegay inuu noqday mindi bilaa af ah, waxaanu markan yidhi: “Cristiano wuxuu hadda ku ciyaari karayaa taam ahaansho wanaagsan. Wuxuu u baahan yahay inuu horumar sameeyo qaybta dambe, taasna ciyaarba ciyaarta ka dambaysa ayuu fiicnaan doonaa.
“Wuxuu u baahan yahay inuu in badan ciyaaro, mustaqbalka wuxuu heli doonaa qaab aanu ku ilaalino kulamada ama kulamada qaarkood. Wuxuu ku fiican yahay isaga ayaa is dhegaysta, waxaanu xaqiiqsan doonaa marka uu u baahanayo inuu joojiyo oo uu nasto, laakiin hadda waxay ila tahay inuu taam yahay.”
Guusha xalay ay Juventus ka gaadhay Lecce, waxay siisay inay toddoba dhibcood ku qabato hoggaanka horyaalka, waxaana mahaddeeda lahaa Paulo Dybala, Ronaldo, Gonzalo Higuain iyo Matthijs de Ligt oo shabaqa soo taabtay.
Ronaldo ayaa u sallaxay Dybala goolka koowaad daqiiqaddii 53aad ka hor intii aanu isagu rikoodhe ku labaynin sagaal daqiiqadood kaddib.